Xubno ka socotay Jaamacadaha Muqdisho oo laga soo masaafuriyay Somaliland – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Xubno ka socotay Jaamacadaha Muqdisho oo laga soo masaafuriyay Somaliland
Illaa 11 xubnood oo ka socda Jaamacadaha ka dhisan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa si qasab ah looga soo masaafuriyay deegaanada Somaliland, xilli ay qosheeynayeen inay shir uga qeyb gelaan magaalada Burco ee gobolka Togdheer.
Shirkaan oo ahaa kii labaad ee lagu qabto Somaliland ayaa waxaa soo qaban-qaabiyay Ururka Midowga Jaamacadaha Carabta, wuxuuna ahaa mid cilmi isweydaarsi ah oo looga hadlaayay iskaashiga jaamcadaha iyo tayeynta waxbarashada.
Wasiirka waxbarashada Somaliland C/laahi Ibraahim Habane oo amarka dadkaasi lagu masaafuriyay bixiyay ayaa ku dooday in dowladda uu madaxweynaha ka yahay Maxamed C/laahi Farmaajo ay haatan bilawday daan-daansi iyo colaad hor leh.
“Shirkaan waa sanadkii labaad ee la qabanayo, Jaamacada Burco ayaa lagu qabanayay, hase ahaatee dowladda Farmaajo waxay la timid dardar iyo cadaawad hor leh, magaca Soomaalidu wuu inaga dhaxeeyaa laakiin isma haysano ismana matalno.” Sidaas waxaa yiri wasiirka waxbarashada C/laahi Ibraahim Habane.
Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri “Farmaajo xaasidnimo dheeraad ah ayuu la yimid, sidaas ayaa markaas lagu joojinayaa, waanu dhoofinaynaa, waa 11 xubnood oo ka socda jaamacadaha, kuweenana waa loo wadayaa seminaarka, haddii ay doonayaan Arab Association ha ugu tagaan Muqdisho.”
Dhinaca kale, madaxa xiriirka dadweynaha ee Jaamacadda Burco Axmed Muuse Ismaaciil ayaa sheegay inay la yaabeen talaabadaan ay ku dhaqaaqday xukuumadda Somaliland, jaamacadahaasina aanay ku jirin siyaasad, waxa laga hadlayna ay kaliya ahaayeen tayadda waxbarashada oo ay ogolaasho ka heysteen wasaaradda.
Ugu dambeyntii, guddoomiyaha xisbiga mucaaradka maamulka Somaliland ee UCID Feysal Cali Waraabe ayaa isna xukuumadda Somaliland ku cambaareeyay talaabadaan ay qaaday.
Wuxuu Feysal Cali Waraabe sheegay inuu aad uga xunyahay in ishor-taag lagu sameeyay mas’uuliyiin ka tirsanaa Jaamacadaha dalka Soomaaliya oo maanta lagu waday inay ka qeyb galaan shirka Burco balse ishor-taag lagu sameeyay.